Toriteny Alahady2 man. Paska - 30/04/2017 - Past. RATSIMBAZAFY Solohery Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Alahady 30/04/2017 – Toriteny Alahady faharoa manaraka ny PASKA,
Pastora RATSIMBAZAFY Solohery, FLM Ambatovinaky,
eto amin’ny flm-orleans.org
15 Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin’ i Simona Petera: Simona, zanak’i Jaona, moa ny fitiavanao Ahy mihoatra noho ny fitiavan’ireto? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Fahano ary ny ondrikeliko.
16 Hoy indray Izy taminy fanindroany: Simona, zanak’i Jaona, moa tia Ahy va hianao? Dia hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Andraso ary ny ondriko.
17 Hoy Izy fanintelony: Simona, zanak’i Jaona, moa tia Ahy va hianao? Dia nalahelo Petera, satria Izy nanao intelo taminy hoe: Moa tia Ahy va hianao? Ka hoy izy taminy: Tompoko, Hianao mahalala ny zavatra rehetra; fantatrao fa tia Anao aho. Hoy Jesosy taminy: Fahano ary ny ondriko.
18 Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha mbola tanora hianao, dia nisikina ka nandeha tamin’izay tianao; fa rehefa antitra kosa hianao, dia haninjitra ny tananao, ary olon-kafa no hanikina anao ka hitondra anao amin’izay tsy tianao.
19 Ary izany no nolazainy hanambara ny fomban’ny fahafatesana izay hankalazany an’Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany, dia hoy Izy taminy: Manaraha Ahy.
20 Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tian’i Jesosy manaraka, dia ilay niankina tamin’ny tratrany tamin’ny fisakafoana ka nanao hoe: Tompoko, iza no hamadika Anao?
21 Koa rehefa nahita azy Petera, dia hoy izy: Tompoko, inona no ho amin’ity lehilahy ity?
22 Hoy Jesosy taminy: Raha tiako hitoetra izy mandra-pihaviko, ahoanao izany? fa manaraha Ahy hianao.
23 Ary niely tamin’ ny rahalahy izany teny izany, fa tsy ho faty izany mpianatra izany; nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa: Raha tiako hitoetra izy mandra-pihaviko, ahoanao izany?
25 Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon’i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra.